ပလပ်စတစ်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ပလတ်စတစ်အမှိုက်များနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပလပ်စတစ်များအားပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ စက်ရုံသုံးပလပ်စတစ်အပိုင်းအစများသည်ပလတ်စတစ်ကြိတ်ခွဲစက်မော်တာအား ၃.၅ နှင့် ၁၅၀ ကီလိုဝပ်ကြားရှိစက်၏ဖြတ်စက်၏အရှိန်နှုန်းမှာ ၁၅၀ နှင့် ၅၀၀ အကြားရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်တန်းဂျကျွေးသောအစာ၊ ကြိတ်စက်သည်အစိုင်အခဲဓားလှိမ့်စက်နှင့်အခေါင်းပါသောဓားလှည်းတို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အမျိုးအစား LYBH-PS800 မှတ်ချက်
လှည့် Blade ၏အချင်း 420mm
လှည့်ဓါးသွားအရေအတွက် ၂၄ နာရီ 95 * 100 * 22mm
ဓါးအရေအတွက် Fixed 4pcs 100 * 400 * 22mm
ပြီးပြီအရွယ်အစား ၁၂ မီလီမီတာ
ခါးပတ် B အမျိုးအစား ၅ ခု
feed port အရွယ်အစား 525mm * 520mm
စွမ်းရည်ကိုနှိမ်နင်း 500-800kg / h
နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာ 2100 * 1350 * 2200
ပစ္စည်းအလေးချိန် 3200Kg အကြောင်း
ပိုက်၏ဆက်သွယ်မှု သံမဏိ 159mm
ဖုန်ဖယ်ရှားရေး filter 12 pcs
မုန်းတီးမှု ၃ မီလီမီတာ
1. မြင့်မားသောအပေါင်ပစ္စည်းကိရိယာသံမဏိ, ချိန်ညှိရှင်းလင်းရေး, အကြမ်းခံ
2. ကြီးမားသော torque နှင့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူအကြီးစား inertia ဘီး
၄။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများ၏ဒီဇိုင်းသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်စက်နှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်
၆။ Motor overload protection၊ အင်အားအလွန်အကျွံညှိနှိုင်းမှု
လွယ်ကူသောနေရာချထားဘို့ 7. Casters ရွှေ့ပါ
8. Disassembly နှင့် installation ကိုဒီဇိုင်း, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
က။ အလိုအလျောက်နစ်မြုပ် - arc ဂဟေဆော်နည်းပညာချမှတ်ခြင်း။
ခ။ ဂဟေဆော်ခြင်းအားလုံးကိုဂဟေဆော်မှုအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးတို့ကိုသေချာစေရန်အတွက် ultrasonic nondestructive testing method ဖြင့်တွေ့ရှိလိမ့်မည် ဂဟေပုံသဏ္.ာန်။
က။ ထုတ်လွှတ်မှုစံ - မီးခိုးမှအက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်အထူးဓာတ်ငွေ့တိုက်စက်များအသုံးပြုခြင်း။
။ အစိုင်အခဲလေထုညစ်ညမ်းမှု - pyrolysis ပြီးနောက်အစိုင်အခဲသည်နက်ရှိုင်းသောလုပ်ငန်းများ၌ (သို့) ရောင်းနိုင်သောရေနံစိမ်းနှင့်စတီးဝါယာကြိုးများဖြစ်သည် တိုက်ရိုက်၎င်း၏တန်ဖိုးနှင့်အတူ။
ခြောက်သွေ့ပြီးတဲ့နောက်အလွှာစုံစည်ခြောက်စက်များဖြင့်စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များပါ ၀ င်သည့်အဓိကမြို့နေလူထုအမှိုက်သရိုက်များကိုခွဲထုတ်ပြီးနောက်ဓာတ်ငွေ့ပေးစက်၊ ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်မီးဖို၊ အက်ကွဲခြင်း၊ ကလိုရင်း၊ ထွက်ရှိမှုလျှော့ချခြင်း၊ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးထားသောမျှော်စင်ရှိရေများအပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်မီးစက်အတွက်ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာမီးဖိုနှင့်အတူလောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့၊ ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်မီးစက်အတွက်ရေကိုပါနိုင်ငံသားများအတွက်သုံးနိုင်သည်။ သူ ...
စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်သန့်စင်စက်ရုံ, စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ, သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ, အမှိုက်ပုံးအားပြန်လည်အသုံးချစက်, တုရုပြာ, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်,